Medicare Murefu Anovhara Chinyorwa | KarmanHealthcare.com
Medicare neMedicaid ine yakatarwa mutemo maererano kufamba anobatsira mudziyo. Hechino nhungamiro yemutemo chaiwo uye kunzwisisa mitemo yeMedicare nemirau. Izvi ndizvo zvakakosha zvekukwanisa murwere kufukidza uye kudzorera a kufamba anobatsira mudziyo.
Kuvhara kunoonekwa kana kuchionekwa sezvakakosha kuti murwere aite zviitiko zvavo zvezuva nezuva zvinosanganisira kufamba Kusanganisira:
kufamba Anobatsira Midziyo Inosanganisira:
Manual uye simba mavhiripu
Zvinhu zveiyo nhoroondo yemurwere uye kuongororwa kwemuviri kunodiwa kuti vakwanise kuwana Medicare neMedicaid kufukidzwa. Pazasi pane rwekutanga runyorwa rweanodiwa ruzivo:
Iyo Nhoroondo yezviitiko zvakatungamira kuchikumbiro
Ziva iyo kufamba kushaikwa kugadziriswa nechairo chakarairwa
Gadzira kumwe kurapa kusabvisa kudiwa kwe kufamba mudziyo
Tsvaga kuti ese mamwe marudzi emidziyo yepasi akaedzwa asi haasvike pane zvekurapa nekuda kwechikonzero chakanyorwa.
Ziva kuti murwere anogara munzvimbo inotsigira kushandiswa kwakachengeteka kwemidziyo.
Ratidza murwere kana muchengeti anofanira kunge achigona kushandisa chishandiso.
Kutarisana-ne-Chiso Kuongorora Kuongorora:
Musangano wemu-muhofisi pakati pemurwere nachiremba wavo unoda kunyatsotarisa wemurwere kufamba zvinodiwa. Chiremba anofanira kuongorora zvinodiwa nemurwere, kugona kwemuviri, uye zvaasingakwanise.
Mibvunzo yakajairika kune vanachiremba yakashandiswa pakuita kufamba kuongorora kunosanganisira:
Kune here kufamba ganhuriro dzinokanganisa maitiro ezuva nezuva emurwere?
Murwere anoda here, kuve nekuziva kwekutonga, uye kana chiono chekutora chikamu zvakachengeteka mumabasa ezuva nezuva anoda kufamba?
Kuchengeta here kana Walker bvumidza kupedzwa kwakachengeteka uye kwakanaka kwezviitwa zvezuva nezuva?
Murwere ane here simba repamusoro remuviri uye kutsungirira kunodiwa kuti uzvidzivirire chiyero wiricheya yemawoko?
Iye murwere ane simba rakakwana remuti, ruoko rwakabata, kumusoro kwekumusoro basa, chiyero chekugara akatwasuka, uye kugona kumira uye kutenderera kana achifunga zvine simba kufamba mudziyo?
ZveSimba mavhiripu, vane kugona kunoshanda kwekushandisa zvakaringana kudzora kwekutyaira? Murwere ane kugona here, kutonga, uye kugona kuona simba wiricheya naizvo?
Ichitevera kumeso-kumeso nemurwere, chiremba anofanira kunge akaunganidza ruzivo rwakakwana ku yose zvavo kufamba kuongorora.
Anofanira simba kufamba mudziyo unofungidzirwa, ivo vanofanirwa kutumira yakatarwa odha kumutengesi wemidziyo pamwe nezvinyorwa kubva kumeso-kumeso pamwe nechero imwe ruzivo rwekurapa runodikanwa.
Kunyora Prescription / Order:
Ose marongero anofanira kusanganisira:
Tsananguro yechinhu chakarairwa (Basic Terminology kana Yakananga Brand uye Model)
Zuva rekutarisana-ne-kumeso kuongororwa
Zvakakodzera kuongororwa kunoenderana nechiridzwa chiri kurairwa
Kureba kwekuda kwechigadzirwa
Zita rachiremba uye siginecha
Zuva resaina yechiremba
Mutengesi Kugamuchira Order
Mushure mekugashira odha, mutengesi anotumira yakatsanangurwa tsamba yekutsanangura chakanangana nechero chishandiso uye chero mamwe mawedzero akasarudzika kuti anodikanwa. Izvi zvinobhadharwa zvakasiyana kuMedare. Nekudaro, chiremba anofanira kuongorora uye kusaina nemutengesi murwere asati agamuchira yavo kufamba rubatsiro.
Kufukidzwa kwePowered kufamba Zvishandiso:
Chinhu chakakosha kucherechedza nezve kufukidzwa kweMedicare kuri kusimbisa kudiwa kwekurapa kwe "mumba." Medicare inoona mashandiro ezvimwe zvigadzirwa zvekushandisa kwekunze zvakasiyana uye nekudaro kufukidzwa kwemidziyo iyi kwakasiyana nemidziyo yekumba.
Pazasi pane gwara rekukodzera kune yakatarwa kufamba zvishandiso:
wiricheya yemawoko Varwere vachada:
Kumusoro Kukuru Basa: Vanachiremba vanofanirwa kunyora simba, huwandu hwekufamba, uye chero kushomeka kwekunzwa
Vanachiremba vachatarisa chero mamiriro ezvinhu anokanganisa muviri wepamusoro.
Ratidza kutsungirira kusingaverengeki. Cherekedza chero zviratidzo kubva ku-co-morbid chirwere chinogona kukanganisa kutsungirira.
Kukanganisa kwakapfava kunovapo here, kune chero humwe hunyanzvi kana zvigadzirwa zvakafungidzirwa?
Simba rekutanga kufamba mudziyo Chiremba anozoona chevarwere kufamba:
Inodzivirira ivo kubva mukuita zviitiko zvezuva nezuva
Zviitiko zvezuva nezuva hazvigone kuitwa zvakachengeteka kana munguva inonzwisisika
Kukamurwa hakugone kugadziriswa netsvimbo kana Walker kana yakagadzirirwa wiricheya yemawoko
Kumba kwavo ndiko kufambidzana
The kufamba zvishandiso zvinonatsiridza basa rezuva nezuva.
Scooters Maitiro Ekutanga:
Mumwe nemumwe anofanirwa kushandisa murimi system
Ivo vanofanirwa kuve neiyo balance kune uye yepashure kugadzikana pavanoshanda sikuta.
Vane fudzi rakakwana here kufamba, simba uye kubatana kushandisa iyo tiller-mhando kutonga kunoshandiswa pane scooter?
Kumba kwavo kune nzvimbo yekutsigira scooter kufamba?
simba mavhiripu Maitiro Ekutanga:
Pamwe murwere kana muchengeti ane kugona uye kuda kwekushandisa zvakachengetedzeka zvine simba wiricheya.
Patient iri mukati memuganhu wechigadzirwa
Chiremba anopa humbowo hwakajeka kuti munhu wacho haasvike pane zvinodiwa nemuviri kuti ashandise mudziyo wepazasi.
Iye munhu wacho ane chinoonekwa uye ruoko / ziso kubatana kuti ashandise joystick-inodzorwa chishandiso.
kufamba zvishandiso zvinogona kuuya zvakashongedzerwa nezvinhu zvakasiyana kana zvigadziriso, heino maitiro anodikanwa:
Kudzivirirwa Ganda Varwere vaizove:
Yazvino yekumanikidza ulcer
Nhoroondo yapfuura yekumanikidza ulcer pane imwe nzvimbo yekubata nezvigaro
Kunze kana kukanganiswa kwekunzwa munzvimbo yekubatana neyekugara pasi
Iye munhu wacho haakwanise kuita chinoshanda chinorema chinja nekuda kwekuongororwa.
Positioning Iye munhu ane chero akakosha epashure masymmetry ayo anokonzerwa nehumwe kuongororwa. *
Kaputeni uye Rehab Zvigaro Kugara kweRehab kune chigaro chakasimba kana chipfuramabwe uye kumashure uko kunoda kushandiswa kwechigaro chakasiyana kana musana wemusana.
Varwere vanoda chigaro kana musana kusoni asi vasingakwanise nzira dzekuchengetedza ganda kana kumisa cushion vanogona kusangana neCaptain Seat zvinodiwa.
Varwere vanoda kudzivirirwa zvishoma uye / kana kumisikidza pamushini vanofanirwa kusangana nezvinodiwa mu wiricheya Kugara.
* Kuongororwa kunogona kusanganisira:
Musana kuipa zvichikonzera quadriplegia kana paraplegia
mwe Musana chirwere
Chimwe chirwere chinoparadza simba
Anterior nyanga masero ezvirwere: Amyotrophic Lateral Sclerosis
Tumira Polio Kufa
Kunetseka uropi kuipa zvichikonzera quadriplegia
Yehucheche cerebral degeneration
Monoplegia yenhengo yepasi
Hemiplegia nekuda kwekurohwa,
Kunetseka uropi kuipa, kana imwe etiology, tsandanyama dystrophy
Kurwadziwa pachifuva nekuedza - Nhoroondo yeStroke uye nehutachiona hwehutachiona kana hwekukanganisa kugona
Peripheral Vascular Chirwere (claudication)
Vanachiremba vanofanirwa kucherechedza nhoroondo yezviitiko zvakatungamira kuchikumbiro ichi. Ivo vanofanirwa zvakare kuona zvakasarudzika zvakasarudzika kuti zvigadziriswe nehurongwa.
Panofanirwa kuve panofanirwa kunge paine ese mamwe marapirwo akaedzwa asi usabvisa kudiwa kwechigadzirwa. Izvo hazvigadzirise izvo zvekurapa zvinodiwa nemurwere nekuda kwezvakanyorwa zvikonzero.
Nharaunda yemunhu inoda kutsigirwa kushandisa mudziyo pamwe chete navo, kana muchengeti, anokwanisa kushandisa chishandiso.
Panofanirwa kuve neyakaenzana mukati mezvinyorwa zvese uye pakati pechiremba. Kuvhara vaongorori havatenderwe kufungidzira zvekurapa, saka chiremba anofanirwa kunyora zvakajeka rutsigiro rwezvinodiwa zvemunhu.
Chekupedzisira panofanirwa kuve nerondedzero yekufambira mberi kwemunhu.
Medicare neMedicaid vaongorori vanotsvaga yakawandisa ruzivo nezve izvo zvinokanganiswa nemurwere kubva pasimba kusvika pamatanho e kufamba. Vanotarisa nguva yakatorwa yekuti munhu ave nekuvandudzwa mumabasa avo ezuva nezuva.
Vaongorori vanotarisa mamiriro uye kuongororwa uye maitiro ainoita kugona kwemurwere. Nhoroondo yekuchengetedza yemurwere inoongororwa zvakare sekudonha, kusaenzana, uye kubatana kwavo kusati kwavharwa.
Ivo vanofanirwa kuona kutevedza nekushandisa kwechigadzirwa uye kuda uye mutarisiri kubatsira murwere.
Iri harisi danho rakazara-nhanho uye rinofanira kungoshandiswa seyedare gwara.